Iimfundiso Zobunaphakade-Ngaba Unokulahlekelwa Usindiso Lwakho?
Qhathanisa iivesi zeBhayibhile kwiNgxabano ngoKhuseleko lokuSigxina
Ukhuseleko olungunaphakade luyimfundiso yokuba abantu abakholelwa kuYesu Kristu njengeNkosi noMsindisi abakwazi ukulahlekelwa usindiso lwabo.
Eyaziwa nangokuthi "xa usindisiwe, uhlale usindiswa," (OSAS), le nkolelo inamalungu amaninzi kumaKristu, kwaye ubungqina beBhayibhile bubunamandla. Nangona kunjalo, lo mbandela uphikisana ukususela kwi- Revolution , iminyaka engama-500 edlulileyo.
Ngakolunye uhlangothi lwengxaki, amakholwa amaninzi ayengqina ukuba kunokwenzeka ukuba amaKristu 'awe ebabusweni ' aze aye esihogweni endaweni yezulu .
Abaxhasi basecaleni ngalinye baxela ukuba imbono yabo icacile, ngokusekelwe kwiindinyana zeBhayibhile abazisayo.
Iindinyana ezixhasayo ngoKhuseleko lwaphakade
Enye yeengxoxo eziphosakeleyo zokukhusela ngonaphakade zisekelwe xa ubomi obungunaphakade buqala. Ukuba iqala ngokukhawuleza xa umntu emkela uKristu njengoMsindisi kulobu bomi, ngolu hlobo luchaza, lithetha ngokungunaphakade "ngonaphakade":
Izimvu zam ziphulaphule ilizwi lam; Ndiyazi, kwaye ziyandilandela. Ndibanika ubomi obungunaphakade, abayi kutshabalala; akukho namnye ongabakhupha esandleni sam. UBawo, obanike wona kum, mkhulu kunabo bonke; akukho namnye ongabakhupha esandleni sikaBawo. Mna noBawo simnye. " ( Yohane 10: 27-30, NIV )
Ingxabano yesibini ngumnikelo kaKristu okwaneleyo esiphambanweni ukuhlawula isohlwayo kuzo zonke izono zeenkolelo :
Kuye sinokuhlengwa ngegazi lakhe, ukuxolelwa kwezono, ngokuhambelana nobutyebi bobabalo lukaThixo awayebhekisele kuyo ngobulumko nokuqonda. ( Efese 1: 7-8, NIV)
Ingxabano yesithathu kukuba uKristu uyaqhubeka enza njengoMlamli wethu phambi kukaThixo ezulwini:
Ngenxa yoko unako ukusindisa ngokupheleleyo abo bafika kuThixo ngaye, kuba uhlale ephila ukuze abancengele. ( Hebhere 7:25, NIV)
Ingxabano yesine kukuba uMoya oyiNgcwele uya kuhlala eqedela oko waqala ukuzisa ikholwa ekusindisweni:
Kuzo zonke iimithandazo zam kuni, ndihlala ndithandaza ngokuvuyisa ngenxa yobambiswano bakho kwiindaba ezilungileyo ukususela ngomhla wokuqala kuze kube ngoku, ngokuqinisekileyo oku, ukuba lowo owaqala umsebenzi omuhle kuwe uza kuwugqiba ukugqiba ngomhla kaKristu Yesu. ( Filipi 1: 4-6, NIV)
Iingqungquthela Zokulwa noKhuseleko olungunaphakade
AmaKristu acinga ukuba amakholwa angalahlekelwa usindiso abo afumane iindinyana ezininzi ezithi amakholwa angawa:
Abo bahlala edwaleni ngabo bafumana ilizwi ngovuyo xa beva, kodwa abanalo ingcambu. Bakholelwa ixesha elithile, kodwa ngexesha lokuvavanya bayawa. ( Luka 8:13, NIV)
Wena ozama ukulungiswa ngumthetho uye wahlukana noKristu; Uwile ebabeni. ( Galati 5: 4, NIV)
Akunakwenzeka kulabo abaye bakhanyiswa, abaye banambitha isipho sasezulwini, abaye babelana ngoMoya oyiNgcwele, abaye banambitha ukulunga kwelizwi likaThixo namagunya esizayo, ukuba bawa, babuyiselwe kwisiguquko, kuba ekulahlekeni kwabo bebethelela uNyana kaThixo ngokuphindaphindiweyo baze bamthobele ukuhlazola esidlangalaleni. ( Hebhere 6: 4-6, NIV)
Abantu abangabambeleli ukhuseleko olungunaphakade bathi ezinye iivesi ezilumkisa amaKristu ukuba zinyamezele elukholweni lwabo :
Bonke abantu baya kukuthiya ngenxa yam, (uYesu wathi) kodwa lowo oma ngokuqinile kuze kube sekupheleni uya kusindiswa. ( Mateyu 10:22, NIV)
Musa ukukhohliswa: uThixo akakwazi ukuhlekwa usulu. Umntu uvunayo oko uhlwayelayo. Lowo uhlwayelayo ukukholisa isono sakhe, kulo hlobo uya kuvuna ukutshabalaliswa; Lowo uhlwayelayo ukukholisa uMoya, evela kuMoya uya kuvuna ubomi obungunaphakade. (Galati 6: 7-8, NIV)
Jonga ubomi bakho nemfundiso ngokusondeleyo. Ukunyamezela kubo, kuba ukuba uyenjenjalo, uya kusindisa wena kunye nabaphulaphuli bakho. ( 1 Timoti 4:16, NIV)
Ukunyamezela akuveli ngemisebenzi, la maKristu athi, ukusindiswa kufumaneka ngobabalo , kodwa kukunyamezela ekukholweni, okwenziwa kwikholwa nguMoya oyiNgcwele (2 Timoti 1:14) noKristu njengomlamli (1 Timoti 2: 5).
Umntu ngamnye kufuneka azimisele
Abaxhasayo abangunaphakade bakholelwa ukuba abantu baya kubona emva kokusindiswa, kodwa bathi abo bashiya ngokupheleleyo uThixo abazange babe nokholo lokusindisa kwindawo yokuqala kwaye babengenakuba ngamaKristu okwenyaniso.
Abo baphika ukukhuseleka ngonaphakade bathi indlela umntu alahlekelwa ngayo usindiso, ngenxa yesono esingenabugugu (Mateyu 18: 15-18, Hebhere 10: 26-27).
Ingxoxo malunga nokukhuseleka ngonaphakade kuyisihloko esinzima ukufikelela ngokufanelekileyo kule ngcaciso emfutshane. Ngamavesi ephikisayo kunye neengqungquthela zeZibhalo, kudideka ukuba umKristu ongeyena mnye ukwazi ukuba yiyiphi inkolelo yokulandela. Ngako-ke, umntu ngamnye kufuneka athembele kwingxoxo enzulu, ukuqhubela phambili isifundo seBhayibhile kunye nomthandazo ukuze bakhethe ngokwabo imfundiso yokhuseleko olungunaphakade.
(Imithombo: Yonke igcinwe , uTony Evans, i-Moody Press 2002; I-Moody Handbook yeTheology , uPaul Enns; "Ngaba umKristu 'Xa usindisiwe uhlale esindiswa'? NguDkt. Richard P. Bucher; gotquestions.org, carm.org)
Indlela Efanelekileyo Yokukhupha IBhayibhile Edala
UYesu uyababusisa abantwana abancinci (Marko 10: 13-16)
Iiminyaniso zeBhayibhile zokuzila
Ukuhlaziywa kweBhayibhile: uYesu ngomyalelo omkhulu (Marko 12: 28-34)
Imilinganiselo Yentsapho KaYesu (Marko 3: 31-35)
IVangeli NgokukaMarko, Isahluko 3
Indlela yokubiza "umFarisi" eBhayibhileni
Isikhokelo Sokubhengezwa KwePasika
Intlanganiso Phakathi kukaSolomon noShebha
Imisebenzi yokuQala kweBakala yokuqala kwiDolch High-Frequency Words
Iingcebiso ezili-10 eziPhambili zabaFundi beMbali yobuDala
Amanxweme aseMntla yaseMerika, iTamarack kunye neWest Larch
Iimpawu zesiFrentshi - Les Sens
Indlela yokucoca i-Carburetor
10 UMthetho weNkcazo yeZikolo eziNkcazo UkuBhala okuPhakanyisiweyo
Uluhlu lokuFunda lweeNtsana kubantwana kunye nentsha
'Iipaka kunye noLonwabo' Isikhathi 3 Isiqendu Isikhokelo
Lithini IBhayibhile Ngokuxolela?
I-Cuál is el costo de solicitar o renovar el pasaporte americano
Imfazwe ye-1812: UMgaqo-siseko we-USS
Yenza i-Endothermic Reaction
UMthetho woNgcaciso woLuntu lwaMntu oya kwiNgcwele Intliziyo kaYesu
Ziziphi Izambatho Ukuba Unxibe Ukunyuka?
ImiSebenzi yeZiphumo eziKhuselekileyo
Bala i-Formula elula ukusuka kwi-Percent Composition
8 Iibhondi ezifihla i-1960s Batman Theme Song
Ukukhawuleza okukhawulezayo kwi-Star Trek
I-System Party ye-Party kwi-Political American
I-One-Dimensional Kinematics: Ukunyakaza kunye neNgcaciso
Indlela Yokubhiyozela UThixo Nodadekazi eSamhain
Ngaba Abantwana baseMuslim bayigcina inyanga yokuzila ukudla kweRamadan?